ကြီးပွားရေးအတွေးအပိုင်းအစများ- (၂) – PoemsCorner
မင်္ဂလာပါဗျာ… ပထမပိုင်းမှာ Barnes ကတော့ သူရဲ့ လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်လေးတွေကို ချပြသွားတယ်နော်… ခု ဒုတိယပိုင်းမှာ Mr Darby ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်.. Mr Darby ဟာ မြေကြီးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့ သူဟာ လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ရွှေထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိတဲ့ သူဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်.. သူသိတာ မြေကြီးထဲက ရွှေထွက်မယ် ဒါကြောင့် သူဟာ မိုင်းတွင်းကို ၀ယ်ဖို့ စိတ်ကူးတယ်.. ရွှေတူးမယ်ပေါ့လေ.. ဒါကြောင့် သူဟာ သူ့နေထိုင်ရာ Maryland မှာရှိတဲ့ Williamsburg ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်.. သူ့မှာ မိုင်းတွင်းဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံ လုံလုံလောက်လောက်မရှိလို့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေစုပီး လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းအနည်းငယ်၊ ကားလေးတစ်စီး၊ မြေကြီးသယ်ဖို့ ကားတစ်စီး ၀ယ်လိုက်ပါတယ်.. Colorado မှာ
ရှိတဲ့ မိုင်းတွင်း တစ်တွင်းကို ၀ယ်လိုက်ပါတယ်.. ပီးတော့ သူတို့တွေ မိုင်းတွင်းကို အားကြိုးမာန်တက် တူးခဲ့ကြတယ်.. သူတို့ မျှော်လင့်ထားသလို ရွှေကြောလေးတစ်ကြောတွေ့လို့ သူတို့အားလုံး အရမ်းဝမ်းသာသွားကြတယ် ဒီရွှေကြောလေးက ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အကြွေးတွေကြေသွားခဲ့တယ်…. လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ အဖတ်တင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ… ဒါပေမယ့် ရွှေကြောက သေးသေးလေးဆိုတော့ ဘာမှတော့ သိပ်မရလိုက်ဘူး… သူတို့တွေ အကြီးကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာ ဒီလောက်နဲ့ ပီးဆုံးသွားတော့ စိတ်ဓါတ်လေးတော့ နည်းနည်းကျနေပီပေါ့လေ . . . သူတို့ဆက်တူးပါတယ် ဒါပေမယ့် ရွှေတစမှ မတွေ့ရတော့ဘူး။ သူတို့ စိတ်ဓါတ်ကျသွားပီ မယုံကြည်တော့ဘူး.. သူတို့အားလုံး မယုံကြည်တော့ဘူး ဆက်မလုပ်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ စက်ပစ္စည်းနဲ့ မိုင်းတွင်းကိုလည်း ပိုက်ဆံအနည်းငယ်နဲ့ ရောင်းချခဲ့မယ်ပေါ့လေ…
ဒီအချိန်မှာ သူတို့ ငှားထားတဲ့အလုပ်သမားက သူ့မှာရှိစု မတ်စုပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့ မိုင်းတွင်းကို ၀ယ်လိုက်တယ် … သူတို့ကတော့
ကားလေးနဲ့ မြေကြီးသယ်ကားကြီးကို ပြန်ယူပီး ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်.. အလုပ်သမားလေးက မိုင်းတွင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံဟိုချေးဒီချေးနဲ့ ငှားပီးတော့ သူ့မိုင်းတွင်းကို လာကြည့်ခိုင်းသတဲ့ … တခြားမိုင်းတွင်းက လူတွေကတော့ ကြောင်တယ်ပေါ့လေ … ငါတို့တော့ တူးနေတာ နှစ်ကြာနေပီ… ဒီကောင်ဘာကြောင်တာလဲပေါ့. … သူများတူးပီးသား မိုင်းတွင်းအဟောင်းကြီး ယူပီးတော့ပေါ့လေ.. အင်ဂျင်နီယာရောက်လာတဲ့အခါ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်း တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တာ အရင် Mr Darby တို့ တူးလက်စ နေရာရဲ့ ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းအကွာမှာ ရွှေကြောရှိနေတယ်လို့ အဖြေပေးခဲ့တယ်…. တကယ်တူးကြည့်တဲ့အခါ ရွှေကြောကြီးတစ်ကြောကို တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ … အလုပ်သမားလေးဟာ နေ့ခြင်းညခြင်း မီလျံနာ သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. သူက Mr.Darby တို့ကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့တော့ ပိုက်ဆံအနည်းငယ် ပေးခဲ့တယ်တဲ့ ဒီအကြောင်းလေးကို Mr.Darby က ပြောပြခဲ့တာပါ… သူ့အတွက် ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းစာ သင်ခန်းစာကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာ.. သူက ဒီလိုပြောခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာတဲ့၊ ဒါကြောင့် သူဟာ … ငါတို့ နောက်ကို ခြေတစ်လှမ်းတောင် ထပ်မဆုတ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သူအရင်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ယာအလုပ်တွေကို ပြန်မလုပ်ပဲ သူ့နယ်လေးမှာ အသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ အဲ့အချိန်က အသက်အာမခံကုမ္ပဏီတွေ ခေတ်မစားသေးဘူး… သူတို့ ဆွေမျိုးတွေ ၁၅ယောက်လောက်နဲ့ စခဲ့တဲ့ အလုပ်လေးပါ… ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့လေး စဖွဲ့တုန်းကဆိုရင် အသက်အာမခံဝယ်ဖို့ ပြောရင် နိုးဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးကလွဲရင် ဘာမှ မရခဲ့ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် လုံးဝ မရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ငါ့ကို ချောက်ထဲဆွဲချမယ့် လှည့်ကွက်တစ်ခုလိုပဲ သဘောထားခဲ့တယ်… ဒီလှည့်ကွက်ဟာ တစ်ဘ၀လုံးနဲ့ယှဉ်ရင် ခဏတာလေးပါ။ ငါတို့ရပ်ခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းဟာ ငါတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဥပမာ တစ်ခုပါပဲတဲ့။ သူတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်လေးက ခုဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ ခေတ်စားနေပါပီ.. သူတို့ အုပ်စုလေးဟာလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံးအသက်အာမခံကုမဏီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားပါပီဗျာ … Mr.Darby ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးက လူတိုင်းရဲ့ ဘ၀တွေမှာ အောင်မြင်မှုမလာခင် ကျရှုံးမှုတွေ၊ ရပ်ဆိုင်းမှုတွေ၊ ဝေဖန်ခံမှုတွေ လာတတ်တယ်… အဲဒါက ခဏတာ လှည့်ကွက်လေးတစ်ခုပါပဲ… အဲ့ဒီ့ လှည့်ကွက်လေးကို ကျော်သွားပီဆိုရင် အောင်မြင်မှုပန်းကို ဆွတ်ခူးနိုင်ပါပီ.. ဒါပေမယ့် လူအများစုက လှည့်ကွက်အသေးစားလေးထဲမှာပဲ တစ်သက်စာ ရှုံးသွားတတ်ကြပါတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းစာလေးကြောင့် ဒီပန်းကုံးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာလို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ…
သူငယ်ချင်းတို့လဲ ခဏတာလှည့်ကွက်လေးတွေထဲက ရုန်းထွက်နိုင်ပါစေဗျာ
In: ဆောင်းပါး Posted By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) Date: Apr 28, 2011
Leave comment2Comments & 231 views
အော် ညက ဖုန်းမဆက်ပါဘူးလို့ ထင်တာ … စာတွေရေးနေတာကို ကိုလိပ်ပြာ …. စာတွေပေတွေက ပိုအရေးကြီးနေပီပေါ့လေ….
စိတ်အေးချမ်းစွာထားပါ …. ဒေါသတွေ မထွက်ပါတော့ လိပ်ပြာ …. အဆုံးမှာ အမှန်တရားပဲ ကျန်ခဲ့မှာပါ….
By: moesatlay at Apr 29, 2011
တခြားစီပဲဟာ … စာလာဖတ်ပေးလို့ ၀မ်းသာရပါတယ် … မလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေနော် …
By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) at Apr 29, 2011